माछा सँग झुकिएर पनि नखानुहोस् यो चिज,स्वास्थ्यका लागी हुनेछ वि’ष सरह हुन्छ…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
काठमाडौँ : हामीले दैनिक जिवनमा उपयोग गरीने खानेकुराहरु नमिलाई खाने गर्नाले हामी बिरामी भईरहेका हुन्छौ । कुनै खाने कुराहरु यस्ता हुन्छन् जुन सँगै मिलाएर खान मिल्दैन खाएमा हामी बि’रामी हुन्छौ ।
१.दुधको साथमा घ्यु अन्डा , रुखकटहर ,कोदाको ढिंडो र फापरको ढिडो खानु हुदैन ।
२. माछा र सक्खर सँगै खान हुदैन यसले पित्त विगार्छ् ।
३.परेवाको मासु, दुध र मह लामो समय सँगै सेवन गरेमा गलगाँड हुनसक्छ् ।
४. दुधको साथमा बडर,काँचो केरा,आँप,जामुन तित्री,ओखर,दारिम नरिवल खानु हुदैन । यसरी खाएमा दम हुने सम्भावना हुन्छ।
भुलेर पनि सँगसँगै नखानुस् यी खानेकुरा, क्या’न्सर समेत हुनसक्छ !
दशैँमा घरमै यसरी बनाउन सकिन्छ स्वादिष्ट खसीको फिला, बिर्सिनुहुनेछ…
५.भटमास र दुध एकैसाथ खाएमा पत्थरी हुनसक्छ ।
६.गुर्जो र तुलसी एकैसाथ खाएमा अम्लपित्त हुनसक्छ ।
७. भिण्डीको साथ दही मोहि,घ्यु,दुध खानु हुदैन खाएमा अम्लपित्त बढ्छ ।
८. करेलामा साग वा भिण्डी एकसाथ पकाएर खान हुदैन । खाएमा अम्लपित्त बढ्छ ।
९. हाँस वा बकुल्लाको मासु खाएको बेला गेडागुडी र कालो दाल खानु हुदैन । यसरी खाएमा क्यान्सर समेत हुन सक्छ ।
१० .बाँसको तामा,बडरको फल,मह र दुध सँगै खान हुदैन यसले वीर्य नास हुन्छ।
-नुनको बढी सेवनले मस्तिष्क, धमनी र मुटुमा बढी असर गर्छ । शरीरका रसायनमा असन्तुलन आई मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ । -विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एउटा व्यक्तिले प्रत्येक दिन ५ ग्रामभन्दा बढी नुन सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । तर, दक्षिण अफ्रिकीहरू एक दिनमा ८ दशमलव ५ ग्राम नुन खाने गर्छन् ।
जुन पक्षाघात (स्ट्रोक) र हृदयाघातको कारण बनिरहेको छ । -वयस्क मानिसमा आवश्यकभन्दा बढी सोडियम हृ’दयरोगको कारक बन्ने गर्छ । -खानेकुरामा प्रयोग गरिने सोडियमको अत्यधिक मात्राले उच्च र’क्तचाप निम्त्याउँछ । बुढेसकालमा सोच्ने शक्तिमा समेत ह्रास ल्याउँछ । -शरीरमा सोडियमको मात्रा बढी हुँदा घुँडा र हातखुट्टा सुन्निने समस्या देखा पर्छ । -खानेकुरामा नुनको प्रयोग गर्दा त्यो स्वादिष्ट अवश्य हुन्छ । तर, कतिपय खानेकुरा छन्, जसमा नुनको मात्रा मिल्दैन । यस्तो हुँदा त्यसले झनै बढी अस’र गर्ने गर्दछ ।
Previous प्रधानमन्त्रीज्यू बरु सिधै भनिदिनुस्, संख्या गन्‍नेबाहेक केही गरिँदैन – गगन थापा
Next नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ : प्रधानमन्त्री र ‘रअ’ प्रमुखबीचको भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ…हेर्नुहोस् ।